Khabiib Nurmagomedov oo koob khamri ah ka diiday Ferguson & Jawaabtii uu bixiyay oo ka qoslisay Evra iyo Bolt – Gool FM
(Manchester) 04 Okt 2021. Feeryahanka fariistay ee Khabib Nurmagomedov ayaa daaha ka rogay qaabkii uu uga diiday Sir Alex Ferguson koobkii Khamriga ahaa ee loo soo dhiibay kaddib markii ay Sabtidii ku kulmeen garoonka Old Trafford xilli ay madasha ku wehliyeen Patrice Evra oo difaaca kaga ciyaari jiray Manchester United iyo orodyahanka reer Jamaica ee Usain Bolt.
Xiddigii hore ee ciyaaraha UFC ayaa xaadir ku ahaa gegada Masraxa Riyada kulankii ay Man United barbarraha la gashay Everton ciyaar kusoo dhammaatay 1-1 inkastoo keydka lagu soo billaabay saaxiibkiisa gaarka ah ee Cristiano Ronaldo.
Khabib ayaa sidoo kale garoonka kula kulmay macallinkii hore ee Red Devils, Evra iyo Bolt waxaana uu haatan daaha ka rogay inuu si xushmad ay ku jirto u diiday koob khamri ah oo uu usoo dhiibay Ferguson isagoo kula kaftamay inuu dharbaaxi doono saddexdooda haddii uu khamriga cabo.
33-sano jirka reer Russia ayaa ah muslim adag isla markaasna ay xaar ka tahay inuu khamriga cabo.
“Waxay ahayd inaan u sharraxo isaga” ayuu yiri Khabib sida laga soo xigtay RT.
“Waa labo midkood: inaad si toos ah ugu dhaho isaga ‘maya, maya, maya – waxaan ahay Muslim, marnaba ma cabo khamir’.
“Balse waxaan sidoo kale ku iri: ‘arrintan ma fiicno, waayo haddii aan cabo waan idin dharbaaxi dhammaantiin (Fergie, Evra iyo Bolt’.
“Patrice Evra iyo Usain Bolt waa ay fahmeen, Alex Ferguson wax ayuu iga weydiiyay khamriga, isaga waa ay la fiicaan tahay, aniga ma xukminayo.
“Waa uu i fahmay markii dambe, maxaa yeelay uma maleynayo inaan iyaga dharbaaxi doono haddaan cabo sidaas darteed ‘Ok’ ayuu yiri”. ayuu hadalkiisa kusoo xiray Khabib.
Si kastaba ha ahaatee, Dagaalyahanka ka fariistay ciyaarta feerka ee UFC ayaa goor dambe bartiisa Instagram soo dhigay sawir ay ku wada jiraan isaga iyo halyeyga reer Scotland kaasoo lagu tilmaami karo macallinka ugu taariikhda wanaagsan kubadda cagta.
EPL: Kooxaha Liverpool iyo Man City oo dhibcaha ku qeybsaday Garoonka Anfield kulan afar gool la iska dhaliyey...+ SAWIRRO